Standing in the Time ( 2019 ) - Myanmar Asian TV
2019 ခုနှဈကထှကျရှိထားတဲ့ Chinese Romatic Drama လေးတဈခုနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ❤️
(ရိုလား မရိုးလားဆိုတာ Poster တှသော ကွညျ့လိုကျပေါ့ ?)
အားလုံးရဲ့အခဈြတျော The Enternal Love ဇာတျလမျးတှဲလေးကမငျးသားလေး Xing Zhao Lin ရဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတဈခုဖွဈတဲ့ Standing In The Time ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးပါရှငျ့? ( မငျးသားကတော့ ပွောစရာမလိုဘူး အဟိပွီးသားပဲ❤️ )
Zhou Zi Mo (Lei Yang )အဖွဈ Xing Zhao Lin
Lei Yang ကိုစာရေးဆရာတဈယောကျအနနေဲ့Model တဈယောကျအနနေဲ့အလုပျလုပျတဲ့ လူငယျကောငျလေးတဈယောကျအနနေဲ့တှမွေ့ငျရမှာပါ❤️
( Model တဈယောကျအနနေဲ့ဆိုတော့ အဝတျအစားတှကေ အလနျးတှေ လာတော့မှာ အဟိ ?)
မငျးသမီးလေးကတော့ The Endless love မှာတော့ Main role အနနေဲ့ပါဖူးပီးတော့ The Whirlwind Girl -2 (2016)မှာတော့ Main Role နရောကနပေါတဲ့မငျးသမီးလေး An Yue Xi လေးပါ?
( အငျး မငျးသမီးကလဲ အပွဈပွောစရာတော့မရှိပါဘူး Translator မမ တှလေောကျ မပွညျ့ဝတာပဲ ရှိတာ ? )
Li Xiao အဖွဈ An Yue Xi
Li Xiao ဆိုတဲ့မိနျးခလေးတဈယောကျက Resa မဂ်ဂဇငျးတိုကျမှအစမျးခနျ့ဝနျထမျးလေးတဈယောကျဖွဈပီး စာမူဌာနဘကျကိုအပွောငျးရှခေံ့ရတဲ့အခါမှာ မငျးသားရေးတဲ့ဇာတျညှနျးနဲ့သှားတှတေဲ့အခါနှဈယောကျသားဘယျလိုတှေ Romance ဖွဈလာမလဲ?
(မှတျခကျြ ။ ဇာတျလမျးတှဲကို ကွညျ့၊ စောငျကို ကိုကျပွီး အဟိ အဟိ နဲ့ ကွညျ့ကွတာပေါ့နျော ? )
Series Name – Standing In The Time
Rating – 7.3ထိရရှိထားတဲ့ Series တှဲလေးတဈခုပါ
MMATV ပရိသတျအတှကျ Stay Home ရငျ အိမျမှာ ဇိမျလေးနဲ့ တရုတျကားလေး ခံစားလိုကျကွရအောငျ
2019 ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese Romatic Drama လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်❤️
(ရိုလား မရိုးလားဆိုတာ Poster တွေသာ ကြည့်လိုက်ပေါ့ ?)
အားလုံးရဲ့အချစ်တော် The Enternal Love ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကမင်းသားလေး Xing Zhao Lin ရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Standing In The Time ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါရှင့်?( မင်းသားကတော့ ပြောစရာမလိုဘူး အဟိပြီးသားပဲ❤️ )
Zhou Zi Mo (Lei Yang )အဖြစ် Xing Zhao Lin
Lei Yang ကိုစာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့Model တစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ လူငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါ❤️
( Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ အ၀တ်အစားတွေက အလန်းတွေ လာတော့မှာ အဟိ ?)
မင်းသမီးလေးကတော့ The Endless love မှာတော့ Support role အနေနဲ့ပါဖူးပီးတော့ The Whirlwind Girl -2 (2016)မှာတော့ Main Role နေရာကနေပါတဲ့မင်းသမီးလေး An Yue Xi လေးပါ?
( အင်း မင်းသမီးကလဲ အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိပါဘူး Translator မမ တွေလောက် မပြည့်ဝတာပဲ ရှိတာ ? )
Li Xiao အဖြစ် An Yue Xi
Li Xiao ဆိုတဲ့မိန်းခလေးတစ်ယောက်က Resa မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှအစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပီး စာမူဌာနဘက်ကိုအပြောင်းရွေ့ခံရတဲ့အခါမှာ မင်းသားရေးတဲ့ဇာတ်ညွန်းနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါနှစ်ယောက်သားဘယ်လိုတွေ Romance ဖြစ်လာမလဲ?
(မှတ်ချက် ။ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်၊ စောင်ကို ကိုက်ပြီး အဟိ အဟိ နဲ့ ကြည့်ကြတာပေါ့နော် ?)
Rating – 7.3ထိရရှိထားတဲ့ Series တွဲလေးတစ်ခုပါ
MMATV ပရိသတ်အတွက် Stay Home ရင် အိမ်မှာ ဇိမ်လေးနဲ့ တရုတ်ကားလေး ခံစားလိုက်ကြရအောင်
Translators : Cheng Ai Zhen & Yu Yu Aye & Nyo Mee Htike & Eain Dray
Episode 01 Episode 02Episode 03Episode 04Episode 05Episode 06Episode 07Episode 08Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 14Episode 15Episode 16Episode 17Episode 18Episode 19
Episode 01 Episode 02 Episode 03Episode 04Episode 05Episode 06Episode 07Episode 08Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 14Episode 15Episode 16Episode 17Episode 18Episode 19Episode 20Episode 21Episode 22Episode 23Episode 24Episode 25Episode 26Episode 27Episode 28
Episode 20 Episode 21 Episode 22 Episode 23Episode 24Episode 25Episode 26Episode 27Episode 28
Duration: 45 min. min
Starring: An Yuexi, Cheng Hao-Feng, Xing Zhao Lin, Zhu Yan Man Zi,